किन पक्रउ परे बुढानिलकण्ठका वडाध्यक्ष ? - Nepali in Australia
June 27, 2021 autherLeaveaComment on किन पक्रउ परे बुढानिलकण्ठका वडाध्यक्ष ?
काठमाडौं । प्रहरीले बूढानिलकण्ठ १२ का वडाध्यक्ष शम्भु भट्टराई सहित केही स्थानियलाई पक्राउ गरेको छ । उनी सडक विभागमै तालाबन्दी गर्न पुगेपछि पक्राउ परेका हुन् । सडक निर्माण अलपत्र परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका वडाध्यक्ष केही स्थानिय लिएर सडक विभाग तालाबन्दी गर्न पुगेका गिए ।
वडाध्यक्षसहित बूढानीलकण्ठ(१२ का केही स्थानीयवासी पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । ***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*** ।
ठेकेदारलाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि कुनै सुनुवजाइ नभएकोले बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नु परेको अध्यक्ष भट्टराईले बताएका छन् । सडक विभागका कर्मचारी सडक निर्माणप्रति उदासीन रहेको उनको गुनासो छ । पक्राउ परेकाहरूलाई अहिले तिनकुने प्रहरी कार्यालय लगिएको छ ।***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***